AKHRISO: Maxay ka wada-hadleen Madaxweyne Deni iyo Safiirka Imaaraadka Carabta? – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
AKHRISO: Maxay ka wada-hadleen Madaxweyne Deni iyo Safiirka Imaaraadka Carabta?
January 11, 2022 Xuseen 3
Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa hoygiisa Muqdisho ku qaabilay Safiirka Dowlada Imaaradka Carabta ee Soomaaliya, Maxamed Axmed Cuthmaan.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay, ayaa u sheegay P-TIMES in kulanka ayaa looga hadlay Arrimaha Doorashooyinka dalka, doorka Imaaraadka Carabta ee loolanka doorashada, iyo taageerada Imaaraadku siiyo Puntland.
Madaxweynaha ayaa uga mahadceliyay Dowladda Imaaraadka garab istaaga iyo gurmadka ay u fidiyeen dadka Soomaaliyeed ee Abaaruhu saameeyeen.
Kulanka Siciid Deni iyo Danjire Maxamed Cuthmaan, ayaa imaanaya xilli Puntland ay dhowaan soo dhaweeysay go’aankii Ra’iisul Wasaaraha XFS Maxamed Xuseen Rooble, ee ku aadanaa dib u soo celinta xiriirka dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta.
Pudland waxay tiri markii dawladu la wareegtay $9.6 milyan waxbaan Ku leenahay,ee hadda beesadii waa la fasaxay markay maqashay miyaa Deni codsanayaa in lagu taageero si uu kaambaynka ugu galo?
Midowga iyo Deni waa farxeen markii Rooble yiri waan fasaxaynaa,maxaase ka dambeeyay??
Amarkii Madaxweynaha ee ahaa lama dhiibi karo.
Rajo ma lahan meel lacag loosoo marsiiyana ma jirto,xataa Garowe,oo hawada ayaa laga celinaa diyaaradda wadda lacag,xataa carabta Deni kuma aaminayaan.
Ha iska cabaadaan.
Deni oo mudaharaadka kasoo muuqdo waan sugeynay,waase la madnoocay.
Horta, waxaa aanu shaki kujirin in reer Puntland iyo Imaaraatiyiintu kadhexeyso cilaaqad qotodheer oo aan sahal u go’i karayn, marka lagu jimeeyo Soomaalida inteeda kale. Dabcan, dhaqaalaha iyo maciishadda bulshada Puntlandna 90% ayay kutiirsan yihiin dalka Imaaraadka oo ma aha xiriir la iskaga safaadi karo.
Sidaas oo ay tahayse, Imaaraadka haddeeran ma aha kii ay awooweyaasheen garanayeen oo kuxirnaayeen: wuxuu kusoo baxay waddan ay kaaf-iyo-kaladheeri yihiin xaqiiqdii kii asalka ahaa. Walow ay Imaaraatiyiintu asiibeen istraatijiyadda iqtisaadiga ee ay dalkooda muddo gaaban gudaheeda kucasriyeeyeen, waxaa islamarkaana sixun uga faruuray qaladka isna istraajiga ah ee ay Yahuudda iyo Ingiriiska isugu gacangeliyeen.
Imaaraadka hadda jira waa nacabka ugu xun ee Caalamka Islaamka iyo Caalamka Sookorayaba, Soomaaliyana ay kaalin muhiim ah kaga beegantahay. Waa marag-ma-doonto in ay Imaaraatiyiintu Puntland dhaqaale ahaan si ba’an u curyaamiyeen, waddamo kale oo dhowr ah sidooda. Sidaas si kasii daran ayay Soomaaliyana ula degi doonaan haddii ay gacanta kudhigaan; in uu madaxweyne Puntland ah noqdo homboborada libaaxaas dalka kusoowaddana dhaawac weyn ayay u geysan doontaa maqaamka ay Puntland Soomaalida kudhex leedahay.
Taasuna xanuunkeeda ayay leedahay, runtii.
Waxaa laga wad hadlay in uu Deni Markasta diido Doorasho qabsoonta. In Somalia aysan yeelan wax maamul ah. In Dekada Boosaaso aysan marnaba aan dib habayn loogu samaynin. Tan Garacad na ay Imaaraat ku maamulaan.